PUBG Mobile တွင် 90FPS နှင့် 10-bit HDR စနစ်ဖြင့်မကြာမီသင်ကစားနိုင်လိမ့်မည် Androidsis
၎င်းတွင် 90hz မိုဘိုင်းဖုန်းကိုစတင်အသုံးပြုသောသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့တတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် PUBG Mobile ကို 90FPS မှာဖွင့်ပါလက်ရှိ 60FPS ထက်ကျော်လွန်; ဆိုလိုသည်မှာဂိမ်းများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ဤသတင်းကိုဟာဝိုင်ယီတွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး Qualcomm မှကြေငြာခဲ့သော Snapdragon Tech Summit 2019 မှလာသည် အသစ် Snapdragon 865 ချစ်ပ်။ တစ်နည်းပြောရရင် 90hz ကိုခံစားနိုင်ဖို့ဒီချစ်ပ်ပါတဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးလိုအပ်လိမ့်မယ်။
El Pixel4အသစ်သည်ဖန်သားပြင်တွင် 90hz အသုံးပြုသောမိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ထို့ကြောင့်၎င်းသည် PUBG Mobile ၏ 90FPS ၏အားသာချက်ကိုရယူနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီချစ်ပ်အသစ်အတွက်တော့ဒီစွမ်းဆောင်ချက်ကသာမကကမ်းလှမ်းမှုပါ 5G အထောက်အပံ့၊ 200MP ကင်မရာများနှင့် 144Hz display များ.
Snapdragon Tech Summit ၏ဒုတိယနေ့တွင် Qualcomm မှ PUBG Mobile သည်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် ၁၀-bit စစ်မှန်သော HDR အထောက်အပံ့ နှင့် 90FPS mode ကို။ တစ်နည်းပြောရရင်ဒီချစ်ပ်က terminal ထဲရှိ screen ပိုမိုမြင့်မားသော refresh rate ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဘယ်နောက်ဆုံးမှာရလဒ် ချောချောမွေ့မွေ့ဂိမ်းများ အားလုံးအဆင့်မှာချောမွေ့ကာတွန်း။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဗုံးသာဖြစ်ပါက၎င်း PUBG Mobile ၏လက်ရှိ HDR mode ကိုပိုမိုအလေးအနက်ထားရန်အရောင်အားမှန်ကန်သော 10-bit HDR ကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ တကယ်တမ်းလုပ်မှာကတော့ PUBG ရဲ့လက်ရှိ HDR mode ရဲ့အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအခုအချိန်မှာတော့ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတော့မရှိပါဘူး။
အခုငါတို့သိရန်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည် Tencent Games မှာယောက်ျားတွေက 90FPS mode ကိုထောက်ပံ့မယ် နှင့်ယနေ့အရှိဆုံးကစားစစ်တိုက် royal ၏တ ဦး တည်း၏ဂိမ်းသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ဟုစစ်မှန်သော 10-bit နဲ့ HDR; ဘယ်တော့လဲ ရက်များမရှိခြင်းကြောင့်သင်သည်ပြိုင်ပွဲအသစ်ကိုခံစားနိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » PUBG Mobile သည် 90FPS နှင့် 10-bit HDR အတွက်အထောက်အပံ့များရရှိလိမ့်မည်
ဖာနန်ဒို Ortiz ဟုသူကပြောသည်
ထိုအခါငါ mix2s - Snap845 ကိုသုံးပါ
ဖာနန်ဒို Ortiz ကိုပြန်ပြောပါ